Kwenzeka ntoni kwiminyaka engama-40 ubudala? -Izixhobo zeGeofumadas
Kwenzeka ntoni kwi-40?
NgoJulayi, 2012 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
Ngexesha elidlulileyo ndabhala inqaku malunga nenkululeko yenkululeko, kwenye yezinye iinyanga ezinzima. Inqaku endiyithandayo ngokwenene ukufunda kwakhona, kuba mhlawumbi kungomnye walawo apho ubukhulu bomzuzwana bubangelwa khona. Isithunzi esabekwa sasifana nale, nangona umzuzu wawungafani.
Kodwa ngokubanzi, umfanekiso owenziwe ekuhambeni kokugqibela kwintsapho undikhumbuza ukuba umzuzu apho indlela ihamba ngayo kwaye usinika ithuba lokuphonononga ubomi bethu. Kwimihla yakutshandana umhlobo wandibuza into eqhelekileyo, kwenzeka ntoni xa ufikelela emashumi mane kwaye ngeli thuba lohambo ndenze uluhlu oluthile luni na umbuzo kunye nokuba kukho na isizathu esithile sokwenza izinto. Ngoko ngokumphendula, ndingathi akukho tshintsho.
Sisaziva ngendlela efanayo, kwisibuko sivakalelwa ngokufanayo, siyaziyeka ngaphandle kokuzisola ngeenwele ezimvu, kungekhona ukuxhasa imidlana ebhola yebhola elandelanayo, kodwa ngokubanzi umoya kunye nezifiso zihlala zifana.
Yintoni eye yatshintsha imeko yethu, abafana bayakhula baze bangene kuloo nqanaba apho bafuna ixesha elingakumbi -ngezinga eliphezulu-, ngolwazi olungakumbi. Ngoko batshintshe izinto ezibalulekileyo ebomini, phakathi kwezinto zethu ze-25 esizikholelwa kukuba inkululeko kwaye ekugqibeleni iyanelisa njani ixesha lethu elikhululekile. Abanye abasibonanga ngokufanayo, kwaye abafani nathi.
Ubomi bomntu ngamnye buyahlukahluka, kwaye uluntu ngokwawo luchaza izikhokelo zento emele imele impumelelo, ukwaneliseka, ulonwabo, ukuzonwabisa, ukuphefumlelwa, ubomi bentsapho. Lo mkhwa wokucinga ngokuhlukileyo wenza nganye imizuzwana ye-21,600 ubude umongo uhlukile. Ngoko ezinye zezi ngcamango ziguqulelwe kuphela kumongo wesiLatini waseMelika, kunye nohlobo oluphantsi nangakumbi xa sifaka utshintsho lwebala elingaphezulu kwe-40 North.
Kwizinto eziqhelekileyo into engatshintshiyo yinto encinci, phakathi kwe-30 kunye ne-40 iminyaka amehlo ethu aqala ukugxila ekukhuleni kwabantwana bethu (okanye kubazalwana ababenabo). Oku kwahluka kulabo abatshata ngokukhawuleza, okanye abo bahamba ngaphambi kwesikhathi. Abafundi bethu basekuqaleni besikolo okanye e-yunivesithi baphumelela into efanayo, amava ahlala kwaye iimpumelelo ezitholakalayo zisenza sikhohlwe iimpikiswano zemfundo okanye i-teenhood nonsense. Kwaye savuma ukukhumbuza loo minyaka kwaye siyavuya ukubona ukuba abantwana babo bayakhula.
Abo bahamba phambili baqala ukuziva bebodwa kuba abantwana babo baya eyunivesiti baze bavuselele isizukulwana sabo; abo bangenawo baqala ukuva umxube we «Andizange ndihambe»Nge«Ndi fanele»Futhi bajonge imeko yabo kunye nesizukulwana esincinane esithandayo phakathi kokuzilibazisa kunye ne-academy eyinqanaba ngelixa banethuba lokucinga malunga nosapho.
Kwaye ke, ngokobukhulu xa sifikela kwiminyaka engamashumi amane, inzala kubantwana bethu ihamba phambili ngeentlungu ezincinci kunezona esinazo zinamandla. Ngethuba besesikolweni sasingakhathazeki kuba uthando lwabo olungenasiphelo aluzange lube nzima, abazange baqiniseke ukuba sasingamaqhawe angenakuqonda, abazange bazibonele ukuzithemba. Kwakhona intombazana eye yahamba nale minyaka ivuyisa inomdla ofanayo, -ukuba ingagcinwa kude kube ngoko-. Kwaye ukuhlanganiswa kwezinto ezinomdla, kwenza ubomi kwiintonga okanye uzive entloko okanye unqamle iimfuno zentsapho.
Ngoko ke, ezinye zezibonakaliso zam uhambo lokugqibela malunga nomxholo walezi zidalwa.
Ngalesi sigaba, siye saqalisa kwakhona iiklasi zamatriki. Okwangoku ngoku ukuba i-algebra yinto entle kwaye ubonile ukuba akuveli kwelinye ihlabathi kodwa kuthatha ixesha ukusebenzela zonke izikhokelo.
Oku kuye kwaba yinto enomdla, kuba sele ithathe ixesha lokumkholisa ukuba unobulumko kwiimathematika kodwa akwanele. Kunyaka ophelileyo waqala ukukholelwa ukuba kwakubi kakhulu, ngenxa yam kunokuba yena okanye ootitshala bakhe.
Ekugqibeleni, ndikhululiwe ukuba ndiyazi ukuba xa unquma kwiinkqubo zobunjineli, uya kukwazi ukugqithisa isigaba esinzima semathematika. Nangona kwintliziyo yam ndiza kuba ngongqangi ekuthengiseni nasekukhangiseni ... eziya kugqitywa nguye.
Akungabazeki ukuba uya kuba ngumlobi wezobuchwepheshe, into aqalise ngayo kwibakala lesithathu kunye neblogi ye-crazy apho ethetha ngezinto engingaziqondiyo kodwa kuye kwamnceda ukwazi ukuyila izimvo nokubhala ngokucacileyo.
Ngalo nto ihlukile. Ngamanye amaxesha umele uwuyeke ngenxa yokuba ulizuze umkhwa wam ombi wokuziqhayisa ngengqondo.
Kodwa kunomngcipheko ukucinga ukuba ndiyakwazi ukufunda ntoni kwixesha elizayo.
Intatheli enobungcali, ngokukwazi kwakhe ukubhala. Umklami wokwenza ubuchule bakhe ngezandla zakhe, ukudweba kunye neenkcukacha.
Kuba ngoku uthi uya kuba ngumfundisi ... ngokuqinisekileyo uya kuba yinto ekhethekileyo.
Kulo mfanekiso, kunye neendleko eziqhelekileyo zemihla yamaNdiya, nje le mihla ku-UTM yokudibanisa yelizwe elikhuselekileyo.
Ndiya kunika nantoni na ukuba ndiqhubeke ndibona ukumncumo kwakhe.
Ekuhambeni kokugqibela senyuka siye kwi-cusp yecala, ngolwimi lwe-tie. Ngezantsi kwezindlu zabonwa njengeziqwenga zeemodeli, ngasemva kweentaba zeentaba zePuca Opalaca.
Indodana yam yajonga phantsi kwaye yaziphosa njenge-iguana kwezinye iindawo ezingenakukwazi ukuchazela indlela eza kufika ngayo.
Okwangoku intombi yam ikhetha ukuhlala. Nangona sasikhathele yindlela esasiyisa kuyo.
Ukumncothula kwakhe kum khumbuza intombazana ekhanyisa amehlo am. Ngeenwele ebusweni bakhe, kunye nekhono lokwenza ukuba ndicinge ukuba unokuthanda ngaphezu kwee-mortgage.
Yile ndlela izidalwa zethu zihluke ngayo.
Ngamanye amaxesha ndifumanisa kunzima ukucinga ukuba le yinkwenkwe endikufanele ndiyigqoke ngosuku lwesithathu lokuzalwa ngentsasa ekucingeni ukuba inamba yakhe yaphuma ...
... ixesha lidlula kwaye alinanto.
Ndiyakhumbula ukuba ekungenizini kwam, ndacinga ukuba igazi eliqhekekileyo leenombumba engazange liqhube igazi elitsha. Xa sifika esibhedlele, ugqirha wayithatha njengebhokisi, wayisula nge-swab.
Wasigxotha ngokusilumkisa kakuhle isizathu sokuba sibeka i-fajn, i-cash ye-5 cents kunye neiglavu ezithile ukuze angasamli izandla.
Hayi ke ziphi izinto ezingasimsulwa.
Kwipaki yelali, iziqwatho ezithakazelisayo zihlobisa umthi weCeiba, owawutyalwe nguMnu Bonifacio Gómez ngonyaka we-1932.
Umasipala wasungulwa kwi-1887 njengoSan Juan de Buena Vista nangona eyaziwa ngokuba yiSan Juan del Caite, ogama lakhe livela kwilifa lemveli kwi-leather tanning.
Nangona igama layo loqobo lalinguMalutena elithetha iLizwe eliThabileyo, lisentlangeni.
Emva koko sasilala phantsi kwengca waza wabona amasebe phantsi kwezulu ... njengeziwula. Ja. Kuze kube nzima ukunyuka kwemiyane ukuba sibalekele ukukhumbula imbali endala yale ndawo eyayibakho ubhubhane olukhulu lwesibetho semingqungquthela, apho abantu bayihlawula isifo se-malaria kwaye ekungabikho koogqirha babephiliswa kuphela ngeengcambu kunye nemifuno
Emva koko saya emfuleni, okwakuncinane.
Lapha siyakhumbula umlando omdala othi le dolophu yayiselwandle, kufuneka ubone ukuba imvula ibeka njani kwisitrato uErandique ethanda ukubona ukuba kubonakala ukuba amanzi ashiya umhlaba kwaye awawa phantsi esibhakabhakeni.
Kuyakuthi kube yithuba eliphela lokuya kule ndawo. Kodwa ndiqinisekile ukuba la bantwana xa ndingekho apho ukuba ndikhumbuze.
Kwi dolophu sasidla isobho senkuni esimnandi, kunye neethambo ze-guanaco ngoba i-El Salvador kwindawo enamandla kakhulu.
Yenziwe ngokutsha, i-lemon encinane kunye netyuwa yongezwa ... kuyonwabile.
Ngokuqinisekileyo, ixesha litshintsha. Sifunda ukunandipha ixesha elilula, nokuba sisendalini kunye nekhofi egranita okanye kwidolophu encinane. Akunjalo ngenxa yokuba sitshintshile, kodwa ngenxa yokuba imeko yabo esiyithandayo ishintshile.
Endleleni yokubuya, sithathe lesi sithombe kwintlambo yase-Otoro, sibheke kwindawo esasivela kuyo.
Yintoni eyenzekayo kwi-40?
Kodwa le nqaku ayengayixeleli ngaloo ndlela i-15 iminyaka edlulileyo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-radiography ekhawulezayo yamaGofumadas ngaphezu kweenyanga ze-75
Post Next Ikhosi yeArcGIS isetyenzisiwe kuPhando lweZimbiwaOkulandelayo »